သင့်မော်တော်ကားအတွက် ဆီချွေတာဖို့ နည်းလမ်း ၁၀ ခု – Gentleman Magazine
သင့်မော်တော်ကားအတွက် ဆီချွေတာဖို့ နည်းလမ်း ၁၀ ခု
သတင်းကောင်းနဲ့ သတင်းဆိုးရှိပါတယ်။ သတင်းဆိုးက ဓာတ်ဆီဈေးတက်ဖို့ ကာလ နီးနေပြီဆိုတာပါ။ သတင်းကောင်းကတော့ ဆီသုံးမှု ချွေတာပြီး ငွေကုန်ကြေးကျ လျော့စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ သင့်ယာဉ်ရဲ့ ဆီစားသုံးမှုကို လျော့ချပေးမယ့် နည်းလမ်း ၁၀ ခုကတော့
လူတော်တော်များများဟာ Highway ပေါ်မှာဆိုရင် သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက် ၅ မိုင် ၁၀ မိုင်လောက် ပိုမောင်းတတ်ကြပါတယ်။ နည်းနည်း စောစော ရောက်ပေမယ့် ဆီကတော့ ပိုစားမှာပါ။ အမြန်နှုန်း ကန့်သတ်ချက်အတိုင်း မောင်းနှင်ခြင်းဟာ ဆီချွေတာပေးမှာပါ။ စောစောရောက်ဖို့ကတော့ စောစောထွက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
၂. တာယာတွေကို လေသေချာ ထိုးထားပါ
တာယာနဲ့ လမ်းသားတို့ ကြားမှာ ပွတ်တိုက်မှု ရှိပါတယ်။ ပွတ်တိုက်မှု နည်းလေလေ ဆီချွေတာမိလေပါ။ သင့်ရဲ့တာယာတွေကို အမြဲ လေ ပုံမှန် အနေအထားရောက်အောင် စစ်ဆေးပေးပါ။ အေးတဲ့ရာသီဆို လမ်းပေါ်ရောက်ရင် လေဖိအားနည်းသွားနိုင်လို့ ပိုဂရုစိုက်ပေးပါ။
၃. ကားကို ရှင်းပါ
ညစ်ပါတ်နေတဲ့ကားက ဆီပိုစားတယ်လို့ မထင်ဘူး မဟုတ်ပါလား။ ဒါပေမယ့် ကားပေါ်က မလိုတဲ့ အလေးချိန်တွေ အားလုံး လျှော့ချခြင်းဖြင့် ဆီကို ပိုပြီး အကျိုးရှိရှိ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဂေါက်အိတ်တွေလိုမျိုးပေါ့။
၄. ကားကို ပုံမှန် အမြဲ ထိန်သိမ်းပေးပါ
ချောဆီပုံမှန်လဲပါ။ Air Filter ပုံမှန်လဲပါ။ အောက်ပိုင်းတွေ ပြန်စစ်ပါ။ အမြဲ ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းဟာ ငွေကုန်ကြေးကျ အရမ်းမများဖို့ သော့ချက်ပါပဲ။ Air Filter တွေ၊ ချောဆီတွေ လဲပြီးနောက်မှာ သင့်ကားရဲ့ ဆီစားသုံးမှုဟာ ၄ ရာနှုန်းလောက် ကျသွားတတ်ပါတယ်။
၅. ဆီဖြည့်ချိန် ဦးနှောက်သုံးပါ
သင့်ရဲ့ ဆီတိုင်ကီကို အမြဲ အပြည့်ဖြည့်ထားစရာ မလိုပါဘူး။ ဆီကန် လေးပုံတစ်ပုံပဲ ကျန်မှ ဖြည့်ပါ။ ဒါဆို သင်နောက်တစ်ခေါက် မဖြည့်ခင် Discount ချပေးတဲ့ ဆီဆိုင်တွေ တွေ့ထားနိုင်ပြီး သင့်ကားလဲ ဆီအလေးချိန် လျော့သွားမှာပါ။ ဖြည့်ရင်လဲ အပြည့်ဖြည့်ပါ။ ဟိုနေရာ နည်းနည်း၊ ဒီနေရာ နည်းနည်း ဖြည့်တာက ပိုချွေတာပုံ ပေါက်ပေမယ့် တကယ်တော့ အချိန်ဖြုန်းရာရောက်ပါတယ်။
၆. ဉာဏ်ရှိရှိ မောင်းပါ
သင် လိုသလောက် အမြန်နှုန်းနဲ့ပဲ မောင်းပါ။ Parking ထိုးလို့ရတဲ့ နေရာတွေ ရှားရင် တွေ့ရာနေရာမှာပဲ ထိုးလိုက်ပါ။ နီးရင် Bus စီးသွားပါ။ လမ်းလျှောက်၊ စက်ဘီးစီးလို့ရတဲ့ အကွာအဝေးဆို ကားမစီးပါနဲ့။ ဆီချွေတာရင်းကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လိုက်ပါ။
၇. Aircon ဖွင့်ရမယ့် အချိန်ကို သိပါ
Aircon ဖွင့်ရင် ဆီကုန်မြန်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ တကယ်ကတော့ မြို့ထဲမောင်းရင်တော့ အဲဒါက မှန်ပါတယ်။ မြို့ထဲမောင်းရင် တံခါးတွေ ချထားပြီး ပြင်ပလေရအောင် မောင်းပါ။ Highway မှာ ဆိုရင်တော့ တံခါးတွေတင်ထားပြီး Aircon ဖွင့်မောင်းတာဟာ တံခါးချမောင်းတာထက် လေခုခံအား လျော့နည်းစေလို့ ပိုဆီစားသက်သာပါတယ်။
၈. ပိုပြီး အကျိုးရှိရှိ မောင်းပါ
မှတ်တိုင်မီးစိမ်းချိန် ဝုန်းခနဲ မောင်းထွက်ချင်နေပါသလား?? လေ့လာမှုတွေကတော့ ဖြည်းဖြည်းပဲ အရှိန်တင်ပြီး တိခနဲ ရပ်ခြင်းဟာ ဆီစားသုံးမှုကို ၃၅ ရာနှုန်းထိ လျော့ချနိုင်ပါတယ် တဲ့။ Auto ကားဆိုရင် မီးစိမ်းတာနဲ့ ဘရိတ်ကို လွှတ်လိုက်ပြီး သူ့ဘာသာ ထွက်တဲ့အရှိန်ကနေပြီးတော့မှ တဖြည်းဖြည်း တင်ပါ။ စက္ကန့်အနည်းငယ် ပိုကြာပေမယ့် ဆီကတော့ ချွေတာမိမှာပါ။
တစ်နေရာရာ မသွားခင် မြေပုံ App တစ်ခုခုနဲ့ သင် သွားမယ့်နေရာကို အမြန်ဆုံး ရောက်မယ့် လမ်း ကြိုရှာထားပါ။ လမ်းကြော ပိတ်မလား မပိတ်ဘူးလားဆိုတာလဲ တွက်ထားပါဦး။
၁၀. ချေးများတဲ့ ဈေးဝယ်သူ ဖြစ်ပါစေ
ဆီဖြည့်ဖို့ နေရာကို သေချာရွေးပါ။ ဈေးအနည်းဆုံး နေရာကို ရွေးဖြည့်ပါ။ အဝေးကြီး သွားစရာ မလိုဖို့ကိုလဲ ဂရုစိုက်ပါ။
ဆီခြှတောဖို့ နညျးလမျး ၁၀ ခု
သတငျးကောငျးနဲ့ သတငျးဆိုးရှိပါတယျ။ သတငျးဆိုးက ဓာတျဆီစြေးတကျဖို့ ကာလ နီးနပွေီဆိုတာပါ။ သတငျးကောငျးကတော့ ဆီသုံးမှု ခြှတောပွီး ငှကေုနျကွေးကြ လြော့စမေယျ့ နညျးလမျးလေးတှေ ရှိပါတယျ။ သငျ့ယာဉျရဲ့ ဆီစားသုံးမှုကို လြော့ခပြေးမယျ့ နညျးလမျး ၁၀ ခုကတော့
လူတျောတျောမြားမြားဟာ Highway ပျေါမှာဆိုရငျ သတျမှတျမိုငျနှုနျးထကျ ၅ မိုငျ ၁၀ မိုငျလောကျ ပိုမောငျးတတျကွပါတယျ။ နညျးနညျး စောစော ရောကျပမေယျ့ ဆီကတော့ ပိုစားမှာပါ။ အမွနျနှုနျး ကနျ့သတျခကျြအတိုငျး မောငျးနှငျခွငျးဟာ ဆီခြှတောပေးမှာပါ။ စောစောရောကျဖို့ကတော့ စောစောထှကျတာ ပိုကောငျးပါတယျ။
၂. တာယာတှကေို လသေခြော ထိုးထားပါ
တာယာနဲ့ လမျးသားတို့ ကွားမှာ ပှတျတိုကျမှု ရှိပါတယျ။ ပှတျတိုကျမှု နညျးလလေေ ဆီခြှတောမိလပေါ။ သငျ့ရဲ့တာယာတှကေို အမွဲ လေ ပုံမှနျ အနအေထားရောကျအောငျ စဈဆေးပေးပါ။ အေးတဲ့ရာသီဆို လမျးပျေါရောကျရငျ လဖေိအားနညျးသှားနိုငျလို့ ပိုဂရုစိုကျပေးပါ။
၃. ကားကို ရှငျးပါ
ညဈပါတျနတေဲ့ကားက ဆီပိုစားတယျလို့ မထငျဘူး မဟုတျပါလား။ ဒါပမေယျ့ ကားပျေါက မလိုတဲ့ အလေးခြိနျတှေ အားလုံး လြှော့ခခြွငျးဖွငျ့ ဆီကို ပိုပွီး အကြိုးရှိရှိ သုံးနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ ဂေါကျအိတျတှလေိုမြိုးပေါ့။
၄. ကားကို ပုံမှနျ အမွဲ ထိနျသိမျးပေးပါ
ခြောဆီပုံမှနျလဲပါ။ Air Filter ပုံမှနျလဲပါ။ အောကျပိုငျးတှေ ပွနျစဈပါ။ အမွဲ ထိနျးသိမျးပေးခွငျးဟာ ငှကေုနျကွေးကြ အရမျးမမြားဖို့ သော့ခကျြပါပဲ။ Air Filter တှေ၊ ခြောဆီတှေ လဲပွီးနောကျမှာ သငျ့ကားရဲ့ ဆီစားသုံးမှုဟာ ၄ ရာနှုနျးလောကျ ကသြှားတတျပါတယျ။
၅. ဆီဖွညျ့ခြိနျ ဦးနှောကျသုံးပါ
သငျ့ရဲ့ ဆီတိုငျကီကို အမွဲ အပွညျ့ဖွညျ့ထားစရာ မလိုပါဘူး။ ဆီကနျ လေးပုံတဈပုံပဲ ကနျြမှ ဖွညျ့ပါ။ ဒါဆို သငျနောကျတဈခေါကျ မဖွညျ့ခငျ Discount ခပြေးတဲ့ ဆီဆိုငျတှေ တှထေ့ားနိုငျပွီး သငျ့ကားလဲ ဆီအလေးခြိနျ လြော့သှားမှာပါ။ ဖွညျ့ရငျလဲ အပွညျ့ဖွညျ့ပါ။ ဟိုနရော နညျးနညျး၊ ဒီနရော နညျးနညျး ဖွညျ့တာက ပိုခြှတောပုံ ပေါကျပမေယျ့ တကယျတော့ အခြိနျဖွုနျးရာရောကျပါတယျ။
၆. ဉာဏျရှိရှိ မောငျးပါ
သငျ လိုသလောကျ အမွနျနှုနျးနဲ့ပဲ မောငျးပါ။ Parking ထိုးလို့ရတဲ့ နရောတှေ ရှားရငျ တှရေ့ာနရောမှာပဲ ထိုးလိုကျပါ။ နီးရငျ Bus စီးသှားပါ။ လမျးလြှောကျ၊ စကျဘီးစီးလို့ရတဲ့ အကှာအဝေးဆို ကားမစီးပါနဲ့။ ဆီခြှတောရငျးကိုယျကာယ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျလိုကျပါ။
၇. Aircon ဖှငျ့ရမယျ့ အခြိနျကို သိပါ
Aircon ဖှငျ့ရငျ ဆီကုနျမွနျတယျလို့ ပွောကွပါတယျ။ တကယျကတော့ မွို့ထဲမောငျးရငျတော့ အဲဒါက မှနျပါတယျ။ မွို့ထဲမောငျးရငျ တံခါးတှေ ခထြားပွီး ပွငျပလရေအောငျ မောငျးပါ။ Highway မှာ ဆိုရငျတော့ တံခါးတှတေငျထားပွီး Aircon ဖှငျ့မောငျးတာဟာ တံခါးခမြောငျးတာထကျ လခေုခံအား လြော့နညျးစလေို့ ပိုဆီစားသကျသာပါတယျ။
၈. ပိုပွီး အကြိုးရှိရှိ မောငျးပါ
မှတျတိုငျမီးစိမျးခြိနျ ဝုနျးခနဲ မောငျးထှကျခငျြနပေါသလား?? လလေ့ာမှုတှကေတော့ ဖွညျးဖွညျးပဲ အရှိနျတငျပွီး တိခနဲ ရပျခွငျးဟာ ဆီစားသုံးမှုကို ၃၅ ရာနှုနျးထိ လြော့ခနြိုငျပါတယျ တဲ့။ Auto ကားဆိုရငျ မီးစိမျးတာနဲ့ ဘရိတျကို လှတျလိုကျပွီး သူ့ဘာသာ ထှကျတဲ့အရှိနျကနပွေီးတော့မှ တဖွညျးဖွညျး တငျပါ။ စက်ကနျ့အနညျးငယျ ပိုကွာပမေယျ့ ဆီကတော့ ခြှတောမိမှာပါ။
တဈနရောရာ မသှားခငျ မွပေုံ App တဈခုခုနဲ့ သငျ သှားမယျ့နရောကို အမွနျဆုံး ရောကျမယျ့ လမျး ကွိုရှာထားပါ။ လမျးကွော ပိတျမလား မပိတျဘူးလားဆိုတာလဲ တှကျထားပါဦး။
၁၀. ခြေးမြားတဲ့ စြေးဝယျသူ ဖွဈပါစေ
ဆီဖွညျ့ဖို့ နရောကို သခြောရှေးပါ။ စြေးအနညျးဆုံး နရောကို ရှေးဖွညျ့ပါ။ အဝေးကွီး သှားစရာ မလိုဖို့ကိုလဲ ဂရုစိုကျပါ။
Previous: အများက မှတ်မိလွယ်သူတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ချက်(၄)ခု
Next: ဉာဏ်ရည်အမျိုးအစားများအကြောင်း သိကောင်းစရာ